Iwindows yakho entsha yeApple iya kujongeka ngakumbi nangomtya omtsha weApple Sports Loop | Ndisuka mac
Xa kufika Uluhlu lwe-Apple Watch 3, imodeli entsha yomtya ifikile ngokufanayo kwisizini entsha. Le yimitya yemidlalo yeLoop, imitya yoqobo evela kuhlobo lweapile, eyenziwe ngezinto ezisemgangathweni kunye Efana nomtya wentsimbi waseMilanese othengiswa ngu-Apple uqobo.
Ezi ntambo zintsha zenziwe ngenayiloni njengemodeli yangaphambili enebhakethi esele inalo uphawu, kodwa ngeli xesha, kuyilo oluguquke ngakumbi olulungiselelwe iimodeli ezithengiswayo eSpain zoluhlu lwe-3, okt. Imidlalo kwialuminium.
Ukugqitywa kwale strap kuyafana nezo zazisele zikhona ngenayiloni kodwa ngokudibanisa ukuba ukuvalwa kufana nomtya waseMilanese kodwa ngevelcro. Zifumaneka ngemibala esibhozo: ingonyama etyheli, orenji orenji, ipinki yombane, umama-weeperile, umnquma omnyama, ipinki yesanti, phakathi kobusuku buluhlaza kunye nomnyama. Kuba izikhonkwane ezingasemva zikhuselekile, lo mtya ubamba konke. Njengamanye amaqela e-Apple Watch, ungadibanisa nayo nayiphi na imeko ye-Apple Watch enobukhulu obufanayo. Sinazo ziyafumaneka kuzo zombini iimodeli ezingama-38mm kunye nee-42mm ngexabiso le- 59 euro.
Ngamafutshane, entsha umtya womtya Ithambile, ilula kwaye iyaphefumla, kwaye iza nokuvalwa kwe-velcro ehlengahlengiswayo. Ilaphu leyiloni elinohlu oluphindwe kabini linothambile, iphedi yokuphefumla apho idibana khona nolusu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-Apple Watch yakho entsha iya kujongeka ngakumbi nangomtya omtsha we-Apple ezemidlalo